Rooble wuxuu sii hurinayaa qalalaasaha Siyaasaddeed | KEYDMEDIA ONLINE
Labada arrimood ee laga sugayay Xukuumadda RW Maxamed X Rooble oo heshay kalsoonida Golaha Shacbiga ee BF 24 Oktoobar 2020 waxay kala ahaayeen:
RW Rooble wuxuu 1da Oktoobar 2020 soo saaray qoraal lagu faahfaahinayo habraaca hirgelinta heshiiska doorashada dadban. Wuxuu soo magacaabay Guddiga doorashada heerka federaalka, guddiga xallinta khilaafaadka doorashada, guddiga doorashada Xildhibannada Somaliland, iyo Guddiga doorashada Xildhibannada Gobolka Benadir.
Magacaabidda guddiyadaas waxaa ka soo baxay dhalliilo badan ( shaqaalenimo, ciidan, taagerayaal, xigaalo, saaxibnimo, sumcad la’aan, aqoon yari, Madaxbannaani la’aan), waxaana loo baahnaa in RW Rooble degdeg wax uga qabto madaama uu asagu soo magacaabay. Dhalliilaha guddiyada doorashada ka sokow, waxaa jira labo arrimood oo muhiim u ahaa qabashada doorasho lagu kalsoonaan karo kuwaaso kala ahaa: Maamulka Gobolka Gedo oo la hoos geeyo DG Jubbaland oo uu ka mid yahay iyo xil ka qaadista Taliyaha Nabadsugidda Fahad Yaasin oo lagu soo eedeyay inuu la wareegay maamulka doorashada taaso ah dambi dastuurka iyo sharciga Ciidammada dhigayo. Labadaas caqabadood waxaa ku soo kordhay qalalaasaha ka taagan DG Hirshabelle.
RW Maxamed Rooble wuxuu goostay inuu tago Puntland asagoo dhegeystay, waxna qaban eedihii DF loo jeediyay lagana sheegay fagaaraha Madasha shirka beesha caalamka oo soomali oo dhan markhaati ka aheyd, eedahaaso horey u soo jeediyeen Guddoomiyaha Aqalka Sare ee BF, Midowga Musharrixiinta Xilka Madaxweynaha, Bulshada Ra’yidka, iyo kooxo ka tirsan qaybaha bulshada Soomaaliyeed. Eedaha waxay ka dhasheen magacaabista guddiyada uu RW Rooble mas’uulka ka ahaa. Sidaa darted, safarka RW Rooble ku tagay wuxuu yahay waqti lumis, gardarro, iyo hurinta qalalaasaha siyaasadda Soomaaliya ka holceysa.
Kulanka dhexmaray RW Rooble iyo Islam Ciise iyo Garaad Saleeban oo la rabay inuu ahaado mid gaar ah (private), waxaa goob joog ka ahaa xubno aan dowladda ka tirsaneyn iyo kuwo aan loo baahneyn inay goobjoog ka noqdaan. Ujeedada RW Rooble ka lahaa kulaankaas warbaahinta loo furay waxay u eg tahay mid laga lahaa dan siyaasadeed.
Marka loo dhabbo-galo Xubnaha Wafdiga RW, dad badan waxay u fasireen in Madaxweyne Farmajo iyo Fahad Yaasin ilaalinayaan RW Rooble oo ay adag tahay inuu ka soo baxo xilka Ra’iisul Wasaaraha laga rabo oo ah inuusan noqon dhaan-raac.
Wax ka qabashada qaladaadka, dhalliilaha, iyo shakiga ka taagan qabashada doorashada waa mas’uuliyad laga rabo RW Rooble sida ku cad dastuurka kmg. Nasiib darro, afartii sano ee Madaxweyne Farmajo xilka hayay, waxaa lagu tuntay dastuurka kmg, kala lahaanshaha mas’uuliyadda iyo awoodaha hay’adaha dastuuriga, waxaana awoodii dowladda maroorsaday Madaxweynaha iyo Taliyaha Nabadsugidda Fahad Yaasin, taaso keentay in RW Rooble qabo, kuna qanacsan yahay inuu yahay adeegaha Madaxweynaha.
Guddoomiyaha Aqalka Sare ee BF, Midowga Musharrixiinta Xilka Madaxweynaha, DG Puntland iyo Jubbaland, Bulshada Ra’yidka, aqlabiyadda waxgaradka Soomaaliyeed waxay isku raaceen in loo baahan yahay in Madaxweyne Farmajo iyo Ra’iisul Wasaare Rooble wax ka qabtaan arrimaha hoos ku qoran: